(Daawo Sawirro) Slobodan Praljak oo sun ku dhex cabay Maxkamada dambiyada dagaalka. – Xeernews24
(Daawo Sawirro) Slobodan Praljak oo sun ku dhex cabay Maxkamada dambiyada dagaalka.
29. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Nin horey loogu xukumay dambiyo dagaal oo uu ka geystay Bosnia, ayna socotay dhagaysiga rafcaan uu ka qaatay xukunkaas ayaa si badheedh ah sun ugu dhex cabay Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka dhexdeeda.
Slobodan Praljak ayaa ka mid ahaa lix hoggaamiye militar oo maxkamadda adduunka saaran, waxaana horey loogu xukumay 20 sano oo xadhig ah sanadkii 2013-kii kadib markii lagu heley inuu dambiyo ka geystey magaalada Mostar ee dalka Boosniya.
Ka dib markii uu maqlay in maxkamadda ay diiday rafcaankiisa ayuu yidhi Waxaan cabayaa sun wuxuuna la soo baxay galas wax dareere ah ku jireen oo uu afka la aaday, kadibna wuu cabay ka hor intii xaakimka uusan joojin dhagaysiga dacwada, islamarkaasna aanan loogu yeedhin gaadiidka gargaarka degdega ah oo goobaha caafimaadka ula cararay.
Ninkan ayaa madax ka ahaa Ciidamada Boosniyanka dalka Croatia oo lagu magacaabo HVO, waxaana lagu eedeeyay inuu laayay muslimiin tiro badan sanadkii 1993-dii xiligii uu socday dagaalkii Jamhuuriyada Boosnia Herzigovina oo lagu xasuuqay kumanaan muslimiin ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/sun.jpg 379 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-29 17:06:102017-11-29 17:06:10(Daawo Sawirro) Slobodan Praljak oo sun ku dhex cabay Maxkamada dambiyada dagaalka.
Akhriso Aragtidda Taageerayaasha Xisbigii Laga Adkaaday ee Wadani. Daawasho Haboon Ka fadhigii 2aad ee Ururka S.R.D.A.(Video)